Uma udala inhlangano kwanoma yiluphi uhlobo, nanoma iluphi uhlobo lokusetshenziswa ubunikazi umkhandlu wendawo, oveza ukubhaliswa ngokomthetho inhlangano, kubalulekile ukuba anikezele ethile, omunye okuyinto incwadi isiqinisekiso evela kubanikazi bako. Lokhu kuwumkhuba ovamile futhi okusakazekile. Isizathu esiyinhloko sokuba khona imibhalo efana Kuyaphawuleka ukuthi inhlangano bhalisiwe ukuthola isitifiketi olufanele unelungelo ukuqhuba iyiphi imisebenzi bese ungena izinkontileka. Ngakho-ke, ukuze uqinisekise ukuthi umsebenzi lo ibhizinisi uzobe kuphela esibekiwe kulo mthetho-sisekelo we uhlamvu, uma incwadi isiqinisekiso abahlinzeki esizayo, amakhasimende noma abaqashi.
Ngaphezu kwalokho, ukuthi idokhumenti kabanzi lisetshenziswe nokubhaliswa inhlangano esemthethweni, isetshenziswa kweminye imikhakha yomsebenzi. Yiqiniso, ingqondo, esizolokhu incwadi isiqinisekiso - ukunikeza isithembiso ebhaliwe (isiqinisekiso), incazelo izinhloso, izimo noma izenzo okumele wenziwe umthumeli ngesikhathi esithile, futhi kuthinte izithakazelo lenhlangano umamukeli.
Le mibhalo ingase iqondiswe kokubili inhlangano kanye esemthethweni. Kulokhu, incwadi ngokwayo angeke ngisho aqukethe igama elithi "isiqinisekiso" - incazelo yalo nokulisebenzisa igama izohlala ingashintshiwe. Njengoba kwakunjalo, le dokhumenti ngeke athembisa ukwenza noma yiziphi izimo.
Inkokhelo izimpahla wathola, izinsuku umkhiqizo kwezidingo, izinga izimpahla noma umsebenzi owawenziwa, imigomo yesevisi noma ukusebenza - konke okungase futhi athembisa incwadi isiqinisekiso. Lezi nemingcele bangase babe khona njengofakazi ingxenye encane umzimba idokhumende noma ukwenza ngokuphelele. Lezi Amafomu ngokuqinile ibhizinisi uhlamvu ezihlobana ngayo amadokhumenti omthetho ohlobo inkontileka. Incwadi isiqinisekiso yokukhokha - ifomu evamile lokhu ephepheni.
I izici eziyinhloko esivela idokhumenti yalolu hlobo ngalinye ukunemba, ukuzwakala, banganhlanhlatsi, futhi okubaluleke kakhulu, ocacile ebhaliwe. Iphuzu lokugcina kubaluleke kakhulu, njengoba incwadi okukhulunywa ukunikeza inhlangano Umamukeli into eqinisekile kusukela ezikhulwini zikahulumeni kuya egameni lomunye inhlangano. Umbhalo kufanele basho uhlobo ukusebenza okuhleliwe.
Kunezinhlobo ezimbili eziyinhloko zezincwadi isiqinisekiso. Enhlanganweni yokuqala inikeza uhlu izizathu spodvigshih wakhe ukubhala leli phepha ukuze bangabhekani. Ngokwesibonelo, inkampani idinga sihlanganise umvuni. Yiqiniso, kusheshe futhi kube lula ukucela kulo mshini kusuka angomakhelwane imifelandawonye yezolimo. Encwadini ka isiqinisekiso, qala ulungise ukuthi kungani inhlangano osidinga ngokuphuthumayo processor, futhi ekupheleni lo musho olandelayo sengezwe ubunjalo "inkokhelo isiqinisekiso" noma "Yenza isiqinisekiso iqashwe zonke kuze kube ...", njll
Imilayezo Uhlobo lwesibili kungaba ngokuqondile qalisa iziqinisekiso: "Lo mbhalo kungaqinisekisa ukukhokha / ukunikela izinto / sihlinzeke izinhlelo, njll ....". Ngaphezu kwalokho, imibhalo eminingi zaloluhlobo, kanye nezimvu zamanzi kanye nesignesha, imininingwane inhlangano-lokukhokha komunye oyedwa. Ukutholakala kwemininingwane enjalo kuyadingeka ifomu ezifana incwadi isiqinisekiso sokukhokha.